PressReader - Ilanga: 2017-10-30 - INTUKUTHELO NGOWEBE UMCHAMO WABAFUNDI
INTUKUTHELO NGOWEBE UMCHAMO WABAFUNDI
Ubathembise uR5 umfundi emunye
Ilanga - 2017-10-30 - Front Page - MTHOBISI SITHOLE
KUXABENE ubendle eMashushu, eNkandla, maphakathi neKwaZuluNatal, njengoba abazali babafundi baseMdlelanga Primary School bevutha bengabaselwe ngenxa yelunga lomphakathi lesilisa elithathe umchamo wezingane zabo lithi liyothaka umuthi wokwenza ama- pile.
Kuthiwa isimo sibi kule ndawo ngenxa yalesi sigameko okubikwa ukuthi senzeke ngesonto eledlule.
Ngokuthola kweLANGA, lona wesilisa osebenza ngaphakathi esikoleni ukutshala engadini, ahlanze igceke, ukhokhobele abafana abayisihlanu ezindlini zangasese wathi mabachamele esigujini uzozipha u-R5 umuntu ngamunye.
Kuthiwa emuva kwalokho izingane zitshele othisha ngoba zingasayitholi imali ebezithenjiswe yona, zafika zabika nakubazali bazo emakhaya.
Kuvela ukuthi abazali balibangise esikoleni bevutha bhe, bebuza ukuthi yake yenzekaphi into efana nalena.
“Abazali bafike bekhala izinyembezi kuthishanhloko bethi kungani kungavele kufe bona kunokuba kubulawe izingane zabo besaphila,” kusho umthombo.
Uthi mkhulu umsindo osendaweni kubatshazwa umhlola mayelana nalo mkhuba.
UNkz Thobekile Khanyile - ongomunye wabazali bezingane ezithintekayo - indodana yakhe efunda uGrade-1 - uthi ingane yakhe isiyazichamela esikoleni, kayisakwazi ukuzibamba emuva kokuba kuthathwe umchamo wayo.
Uthi selokhu kwenzeke lokhu, ikhala ngenkaba, ithi kunento eyidonsayo ngaphakathi.
“Kangizange ngikholwe ngesikhathi ngizwa le ndaba kwaze kwaba ngiya esikoleni ngayobika. Lo baba uxolisile wathi yena ubeyokwenza umuthi wokuchatha ngesikhathi esebizwa ebuzwa phambi kwethu. Okungiphatha kabi kakhu- lu wukuthi uthishanhloko ukhombise ukungaseseki ngoba ulokhu egqugquzela ukuba axolelwe lo baba ekubeni sihlukumezekile ngezingane zethu,” kusho uNkz Khanyile.
UMnu Cebo Gcaba, naye onengane okuthathwe umchamo wayo, uthi kakulaleki uma ecabanga lesi sigameko. Uveze nokuthi ukuxolelwa kwalona wesilisa ngeke kuwenze umehluko ngoba kayaziwa inhloso yakhe yokuthatha umchamo wezingane futhi akawubuyisanga.
“Yithina esizwa ubuhlungu ngoba kasiwazi umkhuba obuyogilwa ngomchamo wezingane zethu. Umoya wami uhlukumezekile, uthishanhloko usitshele ukuthi udaba malushayelwe phansi, lungafiki kwabezindaba,” kusho uMnu Gcaba.
Induna yendawo, uMnu Qedani Nxumalo, ithi lolu daba lukhulunyiwe esikoleni ngoMsombuluko odlule.
“Abantu sebeyizilwane, sebahlale becabanga okubi. Lo muntu uyazithanda kabi izingane, akasoze enze olubi kuzona. Mina ngiyamazi nodokotela wakhe lo muntu, vele unenkinga yama- pile,” kusho uMnu Nxumalo.
Ethintwa uNkz Ncanekazi Dladla, oyilunga lesigungu sesikole, utshele leli phephandaba ukuthi ezingxoxweni zabo nothishanhloko kucelwe ukuba lona wesilisa engabe esasebenza kulesi sikole ngoba abazali badiniwe.
Uthe bazoya kulesi sikole ukuze bathole kabanzi umsuka walolu daba.
“Yisikhathi esibi kakhulu lesi sokubhala kwabafundi izivivinyo, kasiyigqugquzeli into ezophazamisa umgqigqo wokubhala,” kusho uMnu Khuzwayo.